Fedhasaa Taaddasaa Kitaabilee 4 Afaan Oromoo Barreesse Oromoof Gumachee jira.
Kitaabilee Afaan Oromoo Fedhasaan Barreesse Ogbarruun Oromoo uddeellaa irra ture ofirraa fonqolchee daandii guddinaa qabachuunsaa yeroo dhiyoodha. Akka kanaan dhaloonni qubee hojii baay'ee hojjechaa jiru. Fedhasaan Yuunvarsiitii Wallaggaatti Ogbarruu Oromoo Barsiisa. Dagaaginaafi guddina Afaaniifi Aadaa Oromoo keessattis shoora isarraa eegamu ba'uuf tattaafataa jira. Hojiilee boonsaa inni hojjetu keessaa muraasni kitaabilee 4 amma yoonaatti gabaaf dhiyeessee jira.
Kitaabileen kiyya haaraan lama dhiyeenya kana gabaarra oolan. Kitaabilee kana lamaan keessaa tokko asoosama matadureensaa "NUMAANIYAA" jedhu Yommuu ta'u, inni biraanimmoo kitaaba xiinsammuu "Daandii Milkaa'inaa" jedhamuun moggaafamedha.
Numaaniyaan asoosama falaaasamann tumsame ta'ee, ardii dhokottee jirtu tokko mul'isuun dhugaa addunyaa sana keessatti raawwatamu ifoomsa. Ardittiin biyya Ormaaniyaa jedhamtu yommuu taatu, uummata miliyeenatti lakka'aman qabattee jirti. Ta'us garuu hamma yoonaatti kaartaanshee addunyaa jalaa dhokfamee jira. Ormaaniyaan biyya beektota baay'een badhaatee, garuu kan rakkooshee furu dhabde. Waa'ee biyya kanaatu bal'inaan ibsame. Ormaaniyaan ardii falaasamaan suuramtedha. Dubbistoonni ardii dhugoommii (Real world) fidanii xiinxaluu danda'u.
Qabiyyeen Numaaniyaa ibsituu eenyummaati. Calaqqee eenyummaa nama tokkoo maqaarraa jalqabuun balballoomsiti. Maqaan hidhata eenyummaa ta'uu dubbistoota hubachiifti. Kana malees, gaaffii dhalli namaa baatee jiraatuuf fala keessi. Namni maal akka ta'e, jiruun addunyaa kanaa akkamiin akka hiika argatu mul'isuun bu'aa ba'ii sana keessatti xurreen milkaa'inaa akkamiin akka argamu qiyyaafachiifti. Kunis falaasama jireenyaati.
Falaasamni waan uumaafi uumamaaf hiika bilchaataa kennuudha. Gaaffii dhala namaa rakkisuuf deebii eeruufi dinagdee, siyaasa, hawaasummaafi ilaqalcha dhala namaa bal'isanii ilaaluudha. Numaayiyaa jechi jedhuyyuu falaasama mataasaa danda'e waan qabuuf, dubbisanii hubachuun barbaachisaadha.
Kitaabni "DAANDII MILKAA'INAA" jettus kitaaba Xinsammuu (saayikiloojii) taatee, Afaan Ingilizii irraa kan hiikamtedha. Kitaabni kun akkaataa itti Miliyeneroonni miliyeenera ta'an waan barsiistuuf dubbistootaaf dhugaayyuu daandii milkaa'inaa taati. Qolli kitaabilee kanaa armaan gaditti isiniif hidhameera. Kitaabileen kiyya duraan maxxanfamani: Dukkana Barii Jalaa (Asoosama Seenaa Dhugaarratti Hundaa'e)fi Subii (Bu'uraalee Ogbarruu Oromoo) turan.
Kitaabileen kunniin: Dukkana Barii Jalaa (Asoosama), Subii (Bu'uura Ogbarruu Oromoo), Numaaniyaa (Falaasama Argannoo Ardii Haarawaa)fi Dandii Milkaa'inaati (Kitaaba Bizinesii). Kitaabbilee kana kara isiniif danda'ame argachuun akka dubbistan afeeramtaniittu!
Odeeffannoo dabalataaf +251911787196' skype: fedhasaa.tguutaa irratti barreessaa quunnamuu dandeessu!
Fedhasaa Taaddasaa (Yuunvarsiitii Wallaggaatti Barsiisaa Ogbarruu Oromoo
Dukana barii jalaa
Oromoon Kitaaba Oromoo dubsa jeena unis !!!